Mica: manentana ireo mpivarotra | NewsMada
Mica: manentana ireo mpivarotra
Mitohy ny « Hetsika vidin’entana » ataon’ny minisiteran’ny Indostria, ny varotra sy ny asa tanana (Mica). Dingana faharoa, misy karazany roa izao ny ataon’ny Mica. Voalohany ny fanentanana, ny fanabeazana, ny tsiahy. Entanina amin’izany ireo mpivarotra amin’ny filazana ny tahiry misy ao aminy, ny fepetra arahina, sy ny fampahafantarana izany. Ny antontan-taratasy ara-panjakana manamarina izany, ny fampahatsiahivana azy ireo ny lalàna momba ny fifaninanana varotra. Faharoa ny fanaraha-maso amin’ny fandikan-dalàna mifehy ny toekarena ary ny fampiharana lalàna mifandraika amin’izany.
Jerena akaiky amin’ireo fepetra ireo ny mahakasika ireo entana ilaina andavanandro (PPN), iarahan’ny Mica miasa amin’ny kaominina, ny tompon’andraikitry ny tsena, miaraka amin’ny fikambanana mpiaro ny zon’ny mpanjifa. Misy taratasy manamarina ny iraka ataon’ireo olona ireo, ahitana sonian’ny tompon’andraikitra, miaraka amin’ny fanamiana mampiavaka azy ireo.
Betsaka ny tolotra eo amin’ny vary, hoy ny Mica, hanajana ny safidin’ny mpanjifa. Hita amin’izany ireo tolotra isan-karazany, ankoatra ny vary avy any ivelany, ny vokatra eto an-toerana, toy ny vary gasy mena, ny vary gasy fotsy, ny manalalondo, ny tsipala, ny makalioka. Marihina anefa fa efa mananika ny 800 Ar ny kapoaka amin’ireo karazam-bary eto an-toerana ireo.